ညလင်းအိမ်: ချစ်တတ်တဲ့ငါ ... အချစ်ငတ်တဲ့ အခါ
ချစ်တတ်တဲ့ငါ ... အချစ်ငတ်တဲ့ အခါ
ဘယ်ချောင်မှာ သိုဝှက်ထားရမှာလဲ ...။
ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ မင်းရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေတောင်
သူ့တပါးလက်ထဲ ဓားပြတိုက်ခံနေရတယ် ...။
ရောက်သွားတဲ့ ချိုမြိန်တယ်ဆိုတဲ့ စကား
တည့်တည့်ဆိုင်ဆိုင် ပြောနေတဲ့ သူလောက်
လမ်းမပေါက်ဘူးဆိုတာ သိခဲ့သင့်တယ် ...။
ဂရုစိုက် ဖေးမချင်တယ် ဆိုရင်တောင်
ကမ္ဘာတွေ အထပ်ထပ်က လေဟာနယ်ဒြပ်တွေကြောင့်
နီးနေသူ လူတွေလောက်တော့ ချောင်းမပေါက်ခဲ့တာ အသေအချာပဲ ...။
ရှုံးမှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်နေတာ ...။
နစ်မှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖျက်နေတာ ...။
ညစဉ်ညတိုင်း အရိုင်းအစိုင်းဆန်စွာ ငိုရှိုက်နေလည်း
နာကျင်စွာကျောခိုင်းဖို့ပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ...။
ဝေဒနာတွေ ရင်မြွှာအခြေမှာ ကပ်ဆိုက်လည်း
ငါ့အပြစ်ကိုပဲ ကြိုးဆွဲချရတော့မလိုလို ...။
ငါကြွေတဲ့ တစ်နေ့မှ မင်းသိနိုင်ပါစေ ...။
မှန်မှန်းသိရက်နဲ့ ငါကြောက်ခဲ့၏ ...။
မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ငါလျှောက်ခဲ့၏ ...။
မရမှန်းသိရက်နဲ့ ငါချစ်ခဲ့၏ ...။
မနိုင်မှန်းသိရက်နဲ့ ငါစတေးခဲ့၏ ...။
“အချစ်” ဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးကို
“ချစ်တတ်တဲ့ငါ ... အချစ်ငတ်တဲ့ အခါ”
သေစားသေစေ ခံစားစေမယ် ...။
(နာကျင်မှုကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေတိုင်း ရောက်လေရာဘ၀မှာ အချစ် ဖြစ်ပါစေ။)
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 9:40 PM
နာကျင်မှုကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေတိုင်း ရောက်လေရာဘ၀မှာ အချစ် ဖြစ်ပါစေ...
စကားလုံးက တကယ်ထိသွားစေမဲ့ စကားမျိုးပါဘဲဗျာ
အဆုံးသတ်ကို ပိတ်သွားတဲ့ စာသားတွေကလည်း
တအားလှတယ် အစ်ကိုရာ ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံး
တော်တော် နှစ်သက်မိတယ် . . .
အချစ် .. အချစ် .. အချစ်တွေ ..
တော်တော် ကောင်းတယ် ... ။
အကြိုက်ဆုံးပဲ .... !
သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ကဗျာဆိုတာကလွဲပြီး ဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူး။ ကိုယ်လည်း အဲလိုခံစားခဲ့ဖူးတော့
အစ်ကိုရေ.... အချစ်ဆိုတာလေ.. ချစ်နေဖို့လည်း လိုပါတော့တယ်ဗျာ.. တကယ်ပါ.. မောလှပြီ... သူပြန်မချစ်နိုင်ရင်တောင်မှ ကိုယ်ချစ်နေရရင် ကျေနပ်ပါပြီဗျာ... ကြွေတဲ့ တစ်နေ့မင်းသိနိုင်ပါစေ... အစ်ကိုရည်ရွယ်သူသိနိုင်ပါစေဗျာ....
နာကျင်မှုကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေတိုင်း ရောက်လေရာဘ၀မှာ အချစ် ဖြစ်ပါစေတဲ့
“မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ငါလျှောက်ခဲ့၏ ...။
နာကျင်မှုကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေတိုင်း ရောက်လေရာဘ၀မှာ အချစ် ဖြစ်ပါစေ.”...............
ငါကြွေတဲ့ တစ်နေ့မှ မင်းသိနိုင်ပါစေ..။
မောင်လေးရေ... ကဗျာတွေက ကာရံတွေမိသလို ခံစားချက်တွေကိုလည်း ပေါ်လွင်စေတယ်နော်။ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နေရရင် ဘယ်လိုနာကျင်မှု မျိုးကိုမဆို ကျေနပ်ပြီး ခံစားနေရတာမျိုးလေ..။ မောင်လေးရဲ့ အချစ်တွေကို သိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
အမာရွတ် တင်ကျန်ခြင်း မရှိတဲ့ နှလုံးသားပေါ်က ဒဏ်ရာက မေ့ပျောက်နိုင်ခဲ ပါတယ်။
အချစ်ရဲ့နာကျင်ခံစာမှုတွေဟာ ကဗျာကောင်းစာကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာစေတယ်ဆိုတာသိပ်မှန်တယ်ဗျာ...
အချစ်ငတ်ရင်.. အချစ်အသစ်ကို ရှာပေါ့...
အချစ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ မသဂြိုလ် လိုက်ပါနဲ့... :P
ချစ်တတ်လိုက်တာ အစ်ကို ည ရယ်.။
ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်းမှာ အချစ်စစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ အစ်ကိုရေ.။
ပြောချင်ဇောနဲ့ စွတ်ပြောတာ ငေါင်ငေါင်တောင် ဂေါင်ဂေါင်ဖြစ်သွားတယ်.။
ဒိုင်းခနဲ...မှန်ချက်ကယ်...သွေးစိမ်းရှင်ရှင်တွေတောင် ဒလဟောစီးဆင်းလို့ နေတယ်...(lover star)
when i read this poem, I think you know exactly what i feel rite now. The whole poem reflects my love story rite now. Exactly the same. It was like I see through my own feelings. Thanks for the poem. Just let you know that i copy your poem on my facebook. Really love it.
You can copy and share any other because this poem is appeared inside my heart. When I wrote this poem, I felt with tears and hurts. I think my love isaright love for her. Whenever she made me anything, i forgive her because i have never lasting love.Thanks for coming me.
တောင်းတဲ့ဆုတွေ ပြည့်ပါစေ ..နော ..
အဲလောက်ခံစားတတ်တာတွေကိုလဲ ရည်ရွယ်သူ အမြန်ဆုံး သိပြီး ထပ်တူထပ်မျှ နားလည်နိုင်ပါစေ ...
နာကျင်မှုတွေ သက်သာပါစေ ညရဲ့ ကောင်းကင်ရေ အချစ်စစ်အတွက် တစ်နေ့မှ ကောင်းသော တုံ့ပြန်မှုတွေ ရနိုင်ပါစေရှင် :)
ကိုယ့်ကိုတော့ သတ်မသေဘူး :D
“ အကြောင်းမကောင်းတဲ့ ဆောင်း”